DAAHA GADAASHIISA: Masar & Ruushka oo Xaftar ku ballan furaya & Turkiga oo Ruushka ku qalqaalinaya inuu ka boxo isbahaysigiisa! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAHA GADAASHIISA: Masar & Ruushka oo Xaftar ku ballan furaya & Turkiga...
DAAHA GADAASHIISA: Masar & Ruushka oo Xaftar ku ballan furaya & Turkiga oo Ruushka ku qalqaalinaya inuu ka boxo isbahaysigiisa!
(Hadalsame) 09 Juun 2020 – Waxaa ay wax badani iska bedelayaan ragga jilaya masraxa siyaasadeed ee Libya, kaddib guuldarrooyinkii xiriirka ahaa ee ku dhacay hoggaamiye kooxeedka Khaliifa Xaftar oo u muuqda mid hankiisii iminka ku hungoobey.
MAXAA KA MID AH MUUQAALLADA CUSUB?
RUUSHKU wuxuu doonayaa inuu XAFTAR meesha ka baxo. Halka ay Masar si dadban u diiddan tahay inay hub ku kaalmayso iyo xitaa inuu dib ugu noqdo Liibiya, iyada oo ku maaweelinaysa inuu sameeyo qaab dhismeed cusub oo siyaasadeed, jeer ay dhaqdhaqaaqiisa il gaar ah ku eegayso!
Xaftar hub & rasaas buu soo doontay, laakiin MadaMasr waxay qortay in halkaa lagu xayiri doono mudo isbuucyo ah.
Yeelkeede, Qaahira hadda kaddib ma aha dal safka hore uga jira aayaha Libya. Marka laga yimaado Turkiga oo sidoo kale gadaal ku sita dalal badan oo Galbeed ah, Ruushka ayaa ah jilaaga kale ee masraxa ugu wayn, sida uu qabo Jalel Harchaoui, oo ah falanqeeye Libyan ah oo ka tirsan Clingendael Institute oo ku yaalla Hague.
Dhanka kale, xulufadii Xaftar taageeri jirtey ayaa iyaduna madaxa dhulka la dhacaysa. Xaftar dhawr goor oo hore ayuu RUUSHKA ka dheggo adaygay, gaar ahaan shirkii Moosko ee Putin & Erdogan dhexdhexaadinayeen. Wuxuu kaloo ka diiday in aanu Tiripoli dagaal ku qaadin.
Saraakiisha Masaarida laftoodu shaki bay ka qabeen inuu ku guuleyan karro. RUUSHKU wuxuu rabbaa in Xaftar uu xilka Bariga ku wareejiyo askar Qadaafiyiin ah, halka Masar ka doonayso Saalax oo Baarlamaanka Bariga ee Tobruk fadhiya madax u ah, inkastoo saraakiil sarsare oo Masaari ahi ay u arkaan nin waayeel ah oo baarlamaani ahi inaanu wax badan tarayn.
MAXAA SOCDA? Wuxuu MW Masar ee Siisii isu keenay isaga iyo Saalax oo ay beryahan kala xidhiidh furteen. TURKIGA & DAWLADA LIIBIYA waxay iyaguna wadahadal hoose kula jiraan Ruushka sidii Siiriya.
Ruushka waxaa lagu qancinayaa in tubada Gaasta Israel iyo Masar doonayaan inay Yurub gaadhsiiyaan taasoo bariga Liibiya la dhex marin lahaa ay joojin doonaan. Werwerka Ruushku waa in gaas aanu kaantaroolin Yurubta Galbeed la gaadhsiiyo.
Sababta Siiriyana loo burburiyayna waa in tubo qaada gaasta Qadar oo u socota Yurub lasii dhex mariyo Siiriya, taasoo Assad, Iran & Ruushku diideen. Waxaa arinkan loogu danaynayay Ruushka oo tubooyin marinaya Turkiga inaan lagula tartamin suuqa Yurub.
Tuubo kale oo barmuudo ah oo Israel leedahay oo Masar & barigga Liibiya mari lahaydna waxaa Isbaaro u dhigtay Turkiga oo ay dawlada Liibiya u saxeexday inuu masuul ka yahay Aagga Dhaqaalaha Gaarka ah (EEZ) badda Liibiya.
Ruushka & Turkigu waxay ku wada hadlayaan luuqaddii ay Siiriya ku wada hadleen, is-afgarad baana soo dhaw. Masar waxay rabtaa inaan gobollada xaggeeda soo xiga aan loo soo tallaabin si aan amaankeeda loo khalkal gelin.
Ruushka & Masar hoos bay iyaguna u wada shaqaynayaan in Xaftar meesha ka baxo. Imaaraadka oo ay uumi baxday rajadii yarayd ee uu ka qabey in Xaftar Tiripoli qabsado ayaa isna gees kale taagan isaga oo uu soo hadhay Af-kalaqaad, dushiisana ay ku shaxayaan laacibiin ka waawayn kagana waaya aragsan sida loo rog rogo xiriirka caalamiga ah!
Waxaa dhan kale taagan Faransiiska iyo Emmanuel Macron oo Sisi kala hadlay 30-kii Maajo walaaca uu ka qabo isku ballaarinta Turkiga ee Badda Dhexe iyo in aan Turkigu xaq u lahayn inuu kaligii ka arrimiyo aayaha gaaska Libya.
Waxaa Diyaariyey: Axmed Asad & Maxamed Xaaji
Previous article”Culumo” Masaari ah oo guul wayn oo ay Islaamku gaareen siyaasadeeyey (In Hagia Sophia masjid loo rogo oo ay dhaliileen)
Next articleMaxaa dayuuradaha ka badbaadiya inay hawada iskula DHACAAN sida gawaarida? (Warbixin cilmi ah)